Warshadda USB ee Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
USB -ga ayaa si weyn looga isticmaalaa nolosha maanta. Waxay u fiicnaan kartaa kaydinta macluumaadka iyo wareejinta macluumaadka. Jawiga xafiiska bilaa waraaqaha ah, dukumiintiyada u dhexeeya saaxiibbada ayaa asal ahaan ah shabakad elektiroonig ah. Laakiin weli waxaa jiri doona xannibaadyo, sida bay'ad aan la aqoon, jawi shabakad, dukumiintiyada amniga sare ee shirkadda, iyo jawiga shabakadda xun. USB weli waa dalab aad u sarreeya, wuxuuna noqon karaa hadiyad ganacsi oo aad u wanaagsan iyo walxaha xayeysiinta ah. USB waxay leedahay meel ku filan oo lagu daabaco xayaysiiska, kor loogu qaado sawirka summada. Marka lagu daro bannaanka USB LOGO, jabku wuxuu noqon karaa shirkado adkaynaya faylasha xayeysiiska (fiidiyaha, dukumiintiyada, sawirrada, iwm.) Waxay si otomaatig ah u ciyaaraan adeegyada qiimaha lagu daray, cimriga USB waa dheer yahay, samee xayeysiiska sanado badan, mar la bilaabay, astaanta saamaynta dacaayaddu waa joogto. Saamaynta xayaysiisku way ka fiican tahay waxyaabaha kale ee xayeysiinta fudud. Gaar ahaan waxay leeyihiin noocyo kala duwan oo dabool dabool ah, dabool bir ah oo qurux badan, dabool PVC/silikoon ah oo qurxoon kuwani waxay u keeni karaan dareemeyaal kala duwan kuwa wax qaata.
Qalabka: Birta, PVC jilicsan, silikoon, maqaar+bir, ABS, akril, alwaax.
Awoodda: 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB
Naqshadeyn ： Waxaan haynaa qaabab badan oo jira oo dooran kara. Waxa kale oo la beddeli karaa naqshada iyo qaabka.
Habka Logo: Daabacaadda Silkscreen, daabacaadda dib -u -dhigga, laser.
Xidhmada: Sanduuqa warqadda, kiish jilicsan, bac -bireed.
Hore: Chips Turub
Xiga: Dadka haysta Cabitaanka Neoprene
USB Disk -ga la qaadan karo
Cajalladaha USB -ga
Darawallada Flash ee USB
Xusuusta Flash USB
USB Silicone dharbaaxada Band
USB -ga Wristband
Midida & Furitaanka Warqadda
Snowflake Qalab Badan
Lanyards-ku-Biyo-Saaxiibtinimo leh oo Eco-saaxiibtinimo leh